श्रीमती गर्भवती भएको कुरा श्रीमान् निखिललाई थाहै नभएपछि - StarPratika.com
श्रीमती गर्भवती भएको कुरा श्रीमान् निखिललाई थाहै नभएपछि
२ हप्ता अगाडि / ४९ पटक हेरिएको
एजेन्सी : अभिनेत्रीबाट नेता बनेकी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद नुसरत जहां गर्भवती भएको खबर सार्वजनिक भएको छ । अभिनेत्री तसलिमा नसरिनले फेसबुकमा एउटा पोष्ट लेखेर सेयर सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेकी छन् । उनले नुसरतलाई श्रीमानसँग सम्बन्धविच्छेद गर्न सल्लाह दिएकी छन् । तसलिमाले आफ्नो पोस्टमा नुसरत गर्भवती रहेको खबर चर्चामा छ । उनी गर्भवती छिन् । उनका श्रीमान् निखिललाई यसबारे केही थाहा छैन । यी दुई पछिल्लो ६ महिनादेखि अलग बसिरहेका छन् । तर अभिनेत्री नुसरत यश नामका अभिनेतासँग प्रेम रहेको उल्लेख गरेकी छिन् ।
‘मानिसहरुलाई लागिरहेको छ कि बच्चाका पिता यश हुन् निखिल होइनन् । यो साँच्चै हो कि अफवाह यसबारे थाहा छैन तर स्थिति यस्तै रहे के निखिल र नुसरतले सम्बन्धविच्छेद गर्नु नै राम्रो होइन र ? चमेरोजस्तै कुनै पनि अस्थिर सम्बन्धमा झुण्डिनको कुनै अर्थ छैन । दुबै पार्टी यसका कारण असुविधामा रहनेछन्,’ लेखेकी छन् ।
तसलिमा थप्छिन्, ‘जब नुसरत र निखिलको विवाह भयो तब असाध्यै राम्रो लागेको थियो, सृजित र मिथिलाको विवाह जस्तो खुसी लागेको थियो, ठ्याक्कै त्यस्तै । किनभने म गैर सम्प्रदायिकतामा विश्वास राख्छु । यदि दुई धर्मका मानिसहरुबीच विवाह हुन्छ तब म निकै स्वभाविक कारणले खुसी हुन्छु । जाति, धर्म आदिलाई हटाउनु छ भने विभिन्न जाती र विभिन्न धर्म भएका व्यक्तिबीच सम्बन्ध गाँसिनुपर्छ । यसो हुँदा हिंसा हट्न सक्छ । तर कसलाई थाहा थियो र, यदि प्यारो जोडी धेरै दिनसम्म खुसी हुन सक्दैन ।’
‘तपाईं आफ्नो बच्चालाई आफ्नो पहिचानले हुर्काउन सक्नुहुन्छ । पुरुषले आमने सामने हुन पर्दैन । वास्तवमा निखिल र यशमा के अन्तर छ ! अन्त्यमा पुरुष पुरुष नै हुन् । के हामीले दोस्रो विषालु जीवन बाँच्नका लागि दोस्रो विवाह गर्नैपर्छ ? त्यसपछि यो दौड समाप्त नै हुँदैन, मन पराएको व्यक्ति पनि मेल खाँदैनन् । स्वतन्त्र स्त्री र सोचेकै जस्तो पुरुष कल्पनामा मात्रै हुन्छन्, वास्तविकतामा होइन ।’
नुसरत र निखिलले जून २०१९ मा टर्कीमा विवाह गरेको तस्विरहरु फोटो सोसल मिडियामा थुप्रै दिनसम्म भाइरल भइरह्यो । विवाहपछि दुबैले एक–अर्कासँग आफ्ना थुप्रै फोटो सेयर गर्ने गर्दथे । पछिल्लो समय उनीहरु अलग अलग बस्दै आएका छन् ।